Dhex dhexaadiyuhu waa farriinta, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Wixii Ilaah soo dejiyey ayaa innaga dhammaanteen ina saameeya
Runtii waa nimco saafi ah in lagaa badbaadiyey. Adiga naftaada waxba ma qaban kartid laakiin adoo kalsooni ku qaba waxa Ilaah ku siinayo. Wax ku kasbaday maahan inaad wax qabato; maxaa yeelay Ilaah ma doonayo in qofna isku halleeyo wixii uu isagu hortiis ku sameeyay (Warqad ku socota Efesos 2,8–9 GN).
Sidee cajiib ah haddii Masiixiyiintu u bartaan fahamka nimcada!
Fahamkaani wuxuu meesha ka saarayaa culeyska iyo culeyska aan badanaaba ku qabno nafteena Waxay naga dhigaysaa mid deggan oo masiixi ah oo Masiixiyiin ah oo dibadda ah, oo aan gudaha ahayn. Nimcada Ilaah macnaheedu waa: Wax walbaa waxay kuxiran yihiin wixii uu Masiixu noo sameeyay mana aha waxa aan u qabano ama kama qaban karin. Ma heli karno badbaado. Akhbaarta wanaagsan ayaa ah inaanan iibsan karin gabi ahaanba maxaa yeelay Masiixu mar hore ayuu sidaas sameeyay. Waxa kaliya oo ay tahay inaan sameyno waa inaan aqbalno wuxuu Masiixu nagu sameeyey oo aan u muujino mahadnaq weyn.
Laakiin sidoo kale waa inaan taxaddar muujino! Uma oggolaan karno wax aan micno lahayn ee dabiicadda aadamiga in uu inagu hoggaamiyo si aan si heer sare ah uga fikirno. Nimcada Eebbe nagama saarna. Waxaas naga yeelayna kama fiicna tan Masiixiyiinta aan weli aqoon buuxda u lahayn nooca nimcada isla markaana aan ka fiicnayn kuwa aan Masiixiyiinta ahayn ee aan wax ka aqoon. Fahanka dhabta ah ee nimcadu ma keento kibir, laakiin waa ixtiraam qoto dheer iyo cibaadada Ilaah. Gaar ahaan markaan ogaanayno in nimcadu u furan tahay qof walba, oo aan ahayn Kiristanka maanta. Waxay quseysaa qof walba, xitaa haddii aysan waxba ka ogayn arrintaas.
Ciise Masiix wuxuu inoogu dhintay annaga oo weli dembilayaal ah (Rooma 5,8). Wuxuu u dhintay dhammaan kuwa maanta ku nool, dhammaan intii dhimatay, iyo weliba kuwa weli dhalan oo aan annaga ina ahayn, oo aan nafteenna u naqaanno Masiixiyiin maanta. Taasi waa inay naga dhigto kuwo is-hoosaysi iyo mahadnaq ka soo gala qalbiyadeena hoose xaqiiqda ah in Eebbe ina jecel yahay, na daryeelayo oo u muujiyo danta qof walba. Markaa waa inaan sugnaadaa maalinta uu Masiixu soo noqon doono oo qof walbaa ogaan doono nimco.
Ma waxaan ka hadlaynaa naxariis-darrada iyo xannaanada Ilaah ee dadka aan la xiriirno? Mise waxaan u ogolaaneynaa inaynu ku mashquulayno muuqaalka qof, asalkiisa, waxbarashadiisa ama isirkiisa oo ku dhaco dabinka xukunka oo aan u kala xukumno inay yihiin kuwo aad uga yar isla markaana aan ka qiimo badnayn sidii aan nafteenna u tixgelin lahayn? Sida nimcada Ilaahay u furan tahay qof walba isla markaana saameynaysa qof walba, sidaa darteed waxaan dooneynaa inaan isku dayno inaan quluubteenna iyo maskaxdeenna u furno qof walba oo aan kula kulanno dariiqa loo maro nolosha.
Aabe cajiib ah, naga caawi inaan fahamno barakada weyn ee nimcada iyo inaan ku gudubno dhamaan xiriirkeena. Noqo kuwa aan jecel nahay iyo sidoo kale kuwa nagu tartamaya imtixaanka. Aamiin
waxaa qoray Keith Hatrick
Nimcooyinka Ilaah muujiyey way na wada saamaynaysaa dhammaanteen